Izinto ezi-5 xa ukhetha iLizwi lakho ngaphezulu kweTalente yokuPhembelela okuphezulu | Martech Zone
Izinto ezi-5 xa ukhetha iLizwi lakho kwiTalente yeMpembelelo ePhezulu
NgoMgqibelo, ngoJuni 23, 2018 Douglas Karr
Sakhe ubudlelwane obuhle kunye neetalente zokuthetha ngokugqithileyo kule minyaka idlulileyo. UAmanda Fellows yenye yeetalente zethu zegoto, ngokunjalo UPaul noJoyce Poteet. Nokuba yayiyividiyo ecacisa ngokupheleleyo okanye isingeniso sepodcast, siyazi ukuba ukufumana ilizwi elililo ngaphezulu kwetalente kube nefuthe elingaqhelekanga kumgangatho wethu wemveliso.
UPawulos, umzekelo, uyafana nesixeko sase-Indianapolis. Ebekwirediyo, kumabonwakude, kwaye ebelilizwi ngaphezulu kweempawu ezininzi ezikhulu kuloo mmandla. Ngenxa yokuba ilizwi lakhe lahlukile kwaye liyabonakala, sizama ukumsebenzisa kangangoko sinakho kwimisebenzi esekwe e-Indianapolis. Ugqibelele ngokumangalisayo, uhlala erekhoda iindlela ngeendlela ezahlukeneyo esinokukhetha kuzo. Inqaku elisecaleni -Umnye kuphela umntu owonwabileyo, ohlekisayo!
I-Voices.com ivelisa ilizwi lonyaka malunga nengxelo yeendlela ezinegalelo ezivela kubasebenzi abangaphezulu kwe-1,000 XNUMX kwihlabathi liphela, kubandakanya abavelisi, abaqulunqi bokufundisa, abenzi beefilimu, izikhombisi zorhwebo, iinkcazo zentengiso, kunye neengcali zentengiso. Bayikhupha le infographic ebonelela ngohlalutyo kwizitayile zelizwi, iiakhawunti, iilwimi, kunye nakwiimarike zobudala.
Ezinye iziphumo eziphambili kwizwi lokuThengisa ngeLizwi:
Yenziwe yaNgingqi amazwi abaluleke kakhulu ukuzibandakanya nemarike; ngenxa yoko, ibango le-accents liyakhula.
yezizwe ngezizwe Ibango liyakhula, ngezicelo ezingezizo ezesiNgesi zikhula nge-60% ukusuka kwi-2016 ukuya kwi-2017 njengoko indawo yentengiso yehlabathi iqhubeka isanda.
Millennial kunye Senior Ukukhula kweemarike kube nefuthe kubudala belizwi ngaphezulu kwetalente njengoko abathengisi kunye nabathengisi becela italente elingana nelo lijolise kubo kwintengiso.
Njengoko ujonge ukuphucula intengiso yakho kunye neenzame zentengiso ngelizwi ngaphezulu kwetalente, hlala ukhumbula ukuba amazwi endalo asazibandakanya nzulu nabathengi kunamazwi okwenziwa kwaye imfuno yamazwi ababhinqileyo ikhula ngokukhawuleza kunamadoda. Njengoko ujonge ukwenza intengiso yakho elandelayo okanye inzame zentengiso, gcina ezi zinto engqondweni:
Ilizwi lakho ngaphezulu kwetalente kufuneka liqinisekise unxibelelwano lweemvakalelo nabaphulaphuli bakho.
Ilizwi lakho ngaphezulu kwetalente kufuneka lingqamane negama lakho.
Ilizwi lakho ngaphezulu kwetalente kufuneka lihambelane nabantu ekujoliswe kubo.
Ilizwi lakho ngaphezulu kwetalente kufuneka libe nobuntu.
Ilizwi lakho ngaphezulu kufuneka livakale linomdla kwintengiso ekujoliswe kuyo.
tags: amaqabane amandakwenziwa kanjaniJoyce poteetPaul paoteilizwiilizwi ngaphayaIlizwi ngaphezulu kokuphosavoice.com